‘MWEYA’ HAUDI KUTI TIFUGE MAGUMBEZE | Kwayedza
07 Aug, 2020 - 00:08	 2020-08-06T03:56:11+00:00 2020-08-07T00:07:42+00:00 0 Views
Madzimai Nyaradzai Machote
MAPOROFITA matatu echechi yeJohane Masowe weChishanu ari kugara munzvimbo yekutandarira yeAfrica Unit Square, iri pakati peguta reHarare — umo vanoswera nekurara vakafuga zvikweshe — vachiti “mweya” haudi kuti vafuge magumbeze anodziya.
Vatatu ava, avo vanogarawo nemwana mumwechete, vanoti vasvitsa mwedzi vachigara panzvimbo iyi.
Vanorara vakafuga zvikweshe sezvo vachiti “mweya” hauvabvumidze kufuga magumbeze kana zvimwe zvinodziya.
Madzimai Nyaradzai Machote (34), avo vanova muporofita mukuru pachikwata ichi, vanoti vakatumwa nengirozi Gabriel Mutumwa kuti vagare munzvimbo iyi vachinamata.
“Ndakabva kumusha kwangu kumindamirefu yeZiro iri kwaGutu mugore ra2017 izwi rataura kwandiri kuti ndizovhura sowe muno muHarare. Ndakasvikira kuGazebo uko ndine masowe maviri.
“Zvino rwendo rwuno ndakanzi ndiuye pakati peguta reHarare kuzoita minamato ndiine vamwe vangu vaviri vanoti Madzimai Concillia Mushore (60) naMadzibaba Luke Chekwa,” vanodaro Madzimai Machote.
Maporofita matatu aya anoti achagara pakati peguta kusvikira mweya wazovaudza kuti wagutsikana neminamato yavo.
“Takanzi tiuye kuzonamatira pakati peguta titangire munamato wedu tichibata mativi mana. Tichagara pano kusvikira ngirozi Gabriel yatiudza kuti tichibva tichienda kune dzimwe nzvimbo dzakataurwa kuti tiende dzinosanganisira kuBulawayo, Marondera, Mutare neMasvingo,” vanodaro Madzimai Machote.
Madzimai Machote — avo vane mwana wemakore mashanu okuberekwa wavari kugara nekurara naye vasina chekufuga vachitonhorwa — vanoti vanochengetwa naMwari uye hakuna zvirwere zvinovabata.
Zvekuti vasape chirwere chanetsa cheCovid-19 mukana nekuda kwemagariro avari kuita imwewo nyaya.
“Tinochengetwa naMwari, saka hatitye zveCovid-19 izvo,” vanodaro.
Maporofita aya nemwana uyu havana mvura yekushandisa yakachena uyewo nguva dzehusiku havana zvimbuzi zvekushandisa izvo zvave kukonzera kuti vazvibatsirire munzvimbo iyi.
“Hatina dambudziko isu pano, hakuna akambotibvunza kuti tiri kugarirei muno. Panyaya dzekudya, mumwe wedu anodzokera kumba achinotora chikafu icho tinobikira pano.
“Husiku tinobatidza moto tichidziya, chimbuzi tinopinda mune zvekanzuru izvo asi manheru kana vakiya tinongotsvagawo pekuenda,” vanodaro Madzimai Macheto. Nzvimbo iri kuitirwa sowe nemaporofita aya iri pedyo neParliament of Zimbabwe.
Mutauriri wekanzuru yeHarare, VaMichael Chideme vanoti vanhu vari kugara munzvimbo yekutandarira ava vari kutyora mutemo nekudaro vanofanirwa kubviswa.
“Zvavari kuita hazvisi pamutemo. Hazvina mhosva vanamati kana vanhu vakadii, vanofanirwa kubviswa panzvimbo iyi nekuti vanokanganisa vanhu vanotandara munzvimbo iyoyi. Kune nzvimbo dzakakodzera kuita masowe kwete mupark,” vanodaro VaChideme.
Vanovimbisa kuti kune matanho achatorwa nekuda kwevanhu ava kuti vabviswe nekukasika.
“Kunyangwe ivo vanotandara mumapark edu eguta reHarare, vane nguva yavanonzi vabude kana zuva radoka nenguva yavanonzi vapindemo. Izvo zvekuti kune vanhu vave kugara mupark vachiraramo vachibikiramo hazvisi pamutemo,” vanodaro VaChideme.